Ahoana ny fomba hiverenan'ny rohy mankany amin'ny tranokala momba ny fahasalamana?
Raha toa ianao ka mihazakazaka fikarakarana ara-pahasalamana ary mila miverimberina ao amin'ny tranokala iray - dia eo amin'ny toerana mety ianao. Mazava ho azy, ny tranoben'ny rohy dia singa tokana nefa manan-danja indrindra amin'ny SEO mahomby. Ary misy sombin-tsarimihetsika hafa amin'ny tranonkala ankapobeny ilaina mba hiantsoana ny tampon'ny valin'ny fikarohana Google - ny votoatin'ny pejy tsara miaraka amin'ny fanavaozam-baovao tsy tapaka ary ny famoahana vaovao, ny valiny ary ny endri-panamboaran-tranonkala, ny tranonkala mety ho an'ny mpikirakira, ary ny Ny sisa amin'ireo hevi-dehibe eo amin'ny toerana.
Nahoana no miverin-dàlana ho an'ny tranokala momba ny fahasalamana?
Miverimberina mankany amin'ny toerana, raha mandany fotoana sy ezaka ianao mba hahazoana rohy mankany amin'ny tranokala momba ny fitsaboana tianao, dia tokony ho fantatrao izay tokony hataonao amin'izany. Midika izany fa tsara ny "backlinks" tsara ho an'ny orinasanao amin'ny fomba roa.
Toa tsotra sy tsotra izy io, nefa tena mahafinaritra tokoa ny miverina amin'ny dokotera mpitsabo mpanome tolotra an-tserasera, ary koa ireo pejy ofisialin'ny pejy ofisialy na maimaimpoana izay manome fanazavana sarobidy momba ny fitsaboana manokana fampiharana. Nahoana? Satria ireo marary liana kokoa no asehon'ny rohy amin'ny fotoana mety, ny mpividy indrindra dia hanome vola anao hitsidihana azy.
Raha manana rohy mankany amin'ny loharano malaza sy azo itokisana dia manome mari-pankasitrahana tsara ho an'ny Google mba hanatsarana ny fizotry ny fikarohana ao amin'ny tranonkala. Midika izany fa ny fitaovam-pikarohana dia manaiky ny backlinks manerantany ho toy ny mari-pahaizana tsara mba hahatonga ny tranonkalan'ny fitsaboana tsy mahazo fahitana tsara kokoa amin'ny aterineto, fa manam-pahefana matanjaka kokoa amin'ny fotoana iray ihany.
Mahafantatra ny tombontsoany lehibe indrindra amin'ny fampiharana ny fitsaboana, andeha hojerentsika ny fomba hiverenan'ny rindranasa ho an'ny hetsika ho an'ny hetsika - na amin'ny fizarana ny fahaizanao matihanina na ny fitantanana ny raharaham-barotra ao amin'ny lisitry ny fikarohana voalohany.
Aza misalasala mampisambotra ny sasany amin'ny fahalalanao manam-pahaizana mifandraika amin'ny konjonkta ankehitriny. Tadidio fa mila tranonkala vaovao foana ny tranonkala media, mba hijerena adihevitra ampahibemaso momba ny vaovao ara-pahasalamana mahazatra na ny hetsika ara-pahasalamana. Avelao izy ireo hamoaka lahatsoratra tena sarobidy aminao ary manontania rohy mankany amin'ny tranonkalanao. Raha ny marina, tsy ho be loatra ny hangatahana alalana hamadika azy. Ary hampihetsi-po amin'ny mpihaino marobe ny fitsaboana ataonao, indrindra indrindra amin'ny fikarohana ao an-toerana.
Mitantana ny mombamomba anao
Afaka manatsara haingana ny SEO ianao ary mamerina ny rohy mankany amin'ny tranokala - amin'ny iray manontolo - amin'ny fametrahana fanaraha-maso indroa ny mombamomba anao eo amin'ny sehatry ny fikarohana toy ny Google sy Bing, ary koa ny lisitry ny orinasa malaza indrindra, toy ny ZocDoc. Raha tsy afaka mahita ny profesora ara-pahasalamanao ianao, fotoana hiantsoana azy rehetra izany! Amin'izany fomba izany, dia ho afaka hanara-maso ny fiainanao eo amin'ny fiainanao ianao, hanao fanitsiana tsy tapaka hitazonana ny zava-drehetra manan-danja, ary mazava ho azy fa angamba ny sarivongana sarobidy indrindra manondro ny tolotra. Ankoatra izany, ny fanaraha-maso ny lisitry ny orinasa dia midika fa ny valin'ny tranonkala dia mamaritra amin'ny alalan'ny motera fikarohana mikorapaka bôtô, ka izany no mahatonga ny tanjona tsara kokoa ho an'ny toerana ambony kokoa ao amin'ny SERP Source .